Delhi (Arrive) -Mussoorie (02 Nights), Corbett (02 Nights) - Delhi (Drop)
| Mutambo Wokushanyira: 183
ZUVA 01: DELHI - MUSSOORIE (310 KMS - 9 HOURS)
Svika kuDhihihi. Sarudza uye uswededze pedyo neUssoorie. Mangwanani masikati anouya mussoorie & chengetera pahotera yako. Manheru panguva yekuzorora. Usiku huno pahotera.
ZUVA 02: MUSSOORIE - KUDZIDZIRA KUNYIKA
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaDhanaulti iyo 33 kms kubva kune imwe nzvimbo yekare mugomo reS Surkhanda Devi, kukwira kusvika kumakumbo 9700 / 2940 mamita. Deodar uye Pine Trees, mabani akanaka, chando chakavharwa makomo. Uyewo shanyirai Kemtey anozivikanwa achiwa, manheru anofara mumigwagwa yemigwagwa, kudzokera kuhotera. Usiku huno paMusorie.
ZUVA 03: MUSSOORIE - CORBETT (300 KMS - 9 HOURS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya uende kubva kuhotera uende ku Corbett National Park. Paki yakatumidzwa zita raJim Corbett, muvhimi anonyanya-muzvinyorwa akachinja munyori nemufananidzo wemifananidzo uyo akapedza makore mazhinji ehupenyu hwake munzvimbo ino uye akabatsira kuisa paki iyi. Tarisa-in kuhotera yako / nzvimbo. Manheru asingasviki kuona maziso achifukidza Garjia temple uye Corbett kuwira. Kudya uye usiku hwose kuKorbett.
Mangwana mangwanani unofarira jungle safari kuCorbett National Park (pachako iwe pachako). Dzokera kune imwe nzvimbo yekutengesa. Mumazuva masikati, shanyira Corbett Wildlife Museum, Dhikala iyo inopa zvinhu zvinoshamisa zvisinganzwisisiki panoramic yemupata. Dzokera kuchiteshi. Kudya uye usiku humwe pahotera.
ZUVA 04: CORBETT TIGER RESERVE: INDIA
ZUVA 05: CORBETT - DELHI (290 KMS - 8 HOURS)
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, tarisa kubva kuhotera, enda kuDhihi nokuda kwekuenda.